Champions League: Ka egwuregwu taa nwereike isi gaa - BBC News Ìgbò
Champions League: Ka egwuregwu taa nwereike isi gaa
Nkenke aha onyonyo Sevilla na-atụ anya na-etu ha si na-agba ọfụma ga enye ha mmeri taa
Ka a na ahazi nkiri Man United na Sevilla na asọmpi taa nke ga-eme n'ama egwuregwu Ramón Sánchez Pizjuán dị na Spain, onye ọnu na erụ na okwu banyere egwuregwu bọọlụ bu Emeka Offor gwara BBC Igbo ka ihe nwere ike si kwụrụ.
Mazi Offor si na Man United bụ ndị ndị mmadụ na-atụ anya na ha ga-eme ọfuma n'asompi a, mana ha adighi eme ọfụma bọọlụ nke ha gbagoro na afọ di one n'one. Offor sikwara na Sevilla n'onwe ha chụrụ onye ndu ha bụ Eduardo Berizzona n'ọnwa Decemba nke afọ 2017. Sevilla chụrụ ya ka o si ụlọogwụ lota. Berizzona na aria ọrịa Kansa.
Sevilla meriri anọ n'ime asọmpi ise ha sọrọ na mgbe na adịghị anya. Ha nwere ntukwasi obi n'onye ndu ọhụrụ ha bụ Vincenzo Montella, bụ onye gbara bọọlụ ka 'striker' na AC Milan, ga enye ha mmeri.
Mana Sevilla ma na Man United bụ nnukwu mgbidi ha ga arịrị,. Offor gwara anyi.
Nkenke aha onyonyo Man United bu nke nwere ike merie n'asọmpị a
Ọ sikwa na Alexis Sánchez bu otu onye Man United Sevilla ga achọ ize taa, mana, Sevilla ga-eweta ezigbo ohere na asọmpị a ma Man United pụta inye goolu na egwuregwu a.
Cheta na Leichester City meriri Man U na asọmpị ha sọrọ. Ihe a ga-eme ha ka ha kpachara anya obele.
"Man United ga bu ndị a ga-tu egwu kari a na asọmpị a, mana Sevilla nwere ike jiri 2:1 wee hazie asompị nke a ga-agba na Old Traford be ndị Man United," Offor gwara anyi.
Ndị egwuregwu aga ele anya:
Wissam Ben Yedda
Asọmpị ọzọ a ga-ahazii taa bu Shakhtar Donetsk na AS Roma. Otu egwuregwu bọọlụ abụọ a atụghị anya na ha ga apụta na ọkara nke a na-akpo 'group stages' na asụsụ Bekee mgbe ahọpụtara etu a ga-eji gba asọmpị a, dika Offor kwuru.
Cheta na Shakhtar Donetsk gbapụrụ Manchester City na okara mgbapụ nke Champions League na Decemba 2017 na asọmpị ahu tụrụ ndi mmadụ n'anya.
Roma n'onwe ha gbapụrụ Chelsea ji gosi na ha zuru imeri ndị afa ha na-ada ụda. Mana mgbe Roma nọ na ọgbọ a ikpeazu bu kemgbe Totti ha ka na-agbarụ ha bọọlụ.
Nkenke aha onyonyo Ike Roma na Shakhtar Donetsk dị ka ọdị nhatanha
Mana, Offor si anyi na Roma na-abata asọmpị a ka ndị nwere ike merie.
Shakhtar Donetsk n'onwe ha na-ahazighari na okpuru onye ndu ọhụrụ bụ Paulo Fonseca.
Shakhtar na Roma wetara mmeri n'izu ụka gara aga.
Asọmpị a dị ka ọ ga abụ nhantanha. Ọkpụ gọọlụ ha nwere ike ịbụ otu otu.
Offor si na Edin Džeko nke Roma nwere ike inye goolu taa, ka Serhiy Hryn nke shakhtar nwere ike ịkpụ ọku taa.
Ihe ga-eme n'asọmpi Champions League taa
Ihe mere n'etiti Tottenham na Juventus
Man United akụọla Huddersfeild gwogwo
O nweghị ihe jịkọrọ ndị kara nka na ọdịnihu Naijiria
Ihe mere m ji tie egwu Chizoba - Paul
Nutrition: Oke ibu abụghị na ahụ dị nwa gị